Gumiguru 24, 2020
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, mushure mekuvhota kuWest Palm Beach, mudunhu reFlorida, pamberi pesarudzo dziriko musi wa 03 Mbudzi.
Mutungamiri weAmerica VaDonald Trump vavhota neMugovera kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida, pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa 03 Mbudzi. VaTrump, avo vakatora Florida sekumusha kwavo, vavhotera pane imwe yenzvimbo dziri kuvhoterwa zuva resarudzo risati rasvika, yePalm Beach County Public Library, kwakare kuWest Palm Beach.
Apo vaTrump vanga vachivhota kuFlorida, vavari kukwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika, VaJoe Biden veDemocratic Party vachapedza zuva ranhasi vachitsvaga rutsigiro vari mudunhu rePennsylvania.
Mushure mekuvhota, mutungamiri wenyika vachazonotaura kuvatsigiri vavo pamisangano iri ku Lumberton, North Carolina, Circleville, Ohio, neWaukesha kuWisconsin.
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaBiden vachaitawo misangano ku Bucks County, musha uri muPhiladelphia uko Amai Hilary Clinton vakakunda nehuwandu hudikidiki muna 2016, uye mudunhu re Luzerne. Vaive mutungamiri wenyika VaBarack Obama vakakunda mudunhu re Luzerne muraudzo mbiri vagary veko vasati vavhotera VaTrump zvine mutsindo muna 2016.
Chikwata chaVaBiden chiri kutarisirawo kuwana rutsigiro Mugovera wanhasi mudunhu rakakosha reFlorida, VaObama vachiita musangano vari mumotokari vari kuNorth Miami vachimirira vaive mutevedzeri vavo.
Kunyange hazvo sarudzo yemutungamiri wenyika yasarirwa nemazuva ari pasi pemasvondo maviri, vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri vatovhota kare. Vamwe zana remamiriyoni kana kuti 100 million vari kutarisirwa kuvhota achakunda musarudzo asati aziviswa.